မျက်ရည်တွေ ဝဲနေတဲ့ အသက်(၇၀)ကျော် အဖိုးအိုနဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်ကဖြစ်ရပ် - Update News
မျက်ရည်တွေ ဝဲနေတဲ့ အသက်(၇၀)ကျော် အဖိုးအိုနဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဖြစ်ရပ်
ဒီနေ့ ဂုဏ် သိက္ခာနဲ့မေတ္တာတရား ကိုလဲလှယ်ခဲ့တယ် Busကားပေါ် ကျွန်မ တက်သွားတော့ လက်ထဲမှာပိုက်ဆံ၂ထောင် ပါလာတယ် …. ။ အလုပ်မှာထမင်းစားမှာက1800 ကားခက၂၀၀..ကွက်တိ ။ကားပေါ်မှာရှေ့ဆုံးခုံမှာနေရာရတယ် … .။
အဲ့ဒီမှာ..ချောင်လေးမှာကုတ်ကုတ်လေးနဲ့..မျက်ရည်တွေဝဲနေတဲ့.အသက်(၇၀)ကျော်ခန့် ရှိတဲ့အရမ်းဆင်းရဲချို့တဲ့ပုံရတဲ့အဘိုးတစ်ယောက်ကို သွားတွေ့တယ် … ။
ကိုယ့်ေ ဘးမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေ ကိုဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်တော့အသက်ခပ် လတ်လတ်ပိုင်းတွေအများကြီး သူတို့ကို အာ့အဘိုးအိုကြီးကိုမမြင်ကြဘူးလားဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ အားမနာတမ်းကြည့်ပလိုက်မိတယ်။
တချို့ဆိုအဲ့အဘိုးအိုခြေထောက်တွေတောင်တက်နင်းကြတယ်။ဘေးနားကအန်တီကြီးကိုမေးကြည့်တော့ အဲ့တာ သူတောင်းစားကြီးလေ ဘယ်သူကသူ့ကိုခုံပေးမှာလဲရွံဖို့လဲကောင်းတာကိုးတဲ့ ကျွန်မ မစဉ်စားတော့ပဲချက်ခြင်းထပြီး ပါလာတဲ့ပိုက်ဆံ၂ထောင်လုံးပေးပြီး “ဘဘ လာ သမီးခုံလာထိုင်ဆိုပြီးတွဲခေါ်ပေးလိုက်တယ်.. ။
စိတ်ထဲမှာလဲ ငါ့အဖေအမေသာဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးတွေ နဲ့မျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်။ ကားခ၂၀၀မရှိလို့ပါဆိုပြီးပြော စီးလာတယ်။ကားပေါ်မှာအသိတွေလဲပါကောင်းပါနိုင်တယ်… ဒါမယ့်မရှက်ပါဘူး..အခုစာရေးနေတဲ့အချိန် ကျွန်မဖျားနေတယ်လေ အစာလွန်ပြီးဗိုက်တွေအောင့်လို့…ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျေနပ်မိတယ်…။
ဒီေန႔ ဂုဏ္ သိကၡာနဲ႔ေမတၱာတရား ကိုလဲလွယ္ခဲ့တယ္ Busကားေပၚ ကြၽန္မ တက္သြားေတာ့ လက္ထဲမွာပိုက္ဆံ၂ေထာင္ ပါလာတယ္ …. ။ အလုပ္မွာထမင္းစားမွာက1800 ကားခက၂၀၀..ကြက္တိ ။ကားေပၚမွာေရွ႕ဆုံးခုံမွာေနရာရတယ္ … .။
အဲ့ဒီမွာ..ေခ်ာင္ေလးမွာကုတ္ကုတ္ေလးနဲ႔..မ်က္ရည္ေတြဝဲေနတဲ့.အသက္(၇၀)ေက်ာ္ခန႔္ ရွိတဲ့အရမ္းဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ပုံရတဲ့အဘိုးတစ္ေယာက္ကို သြားေတြ႕တယ္ … ။
ကိုယ့္ေ ဘးမွာထိုင္ေနတဲ့သူေတြ ကိုေဝ့ဝဲၾကည့္လိုက္ေတာ့အသက္ခပ္ လတ္လတ္ပိုင္းေတြအမ်ားႀကီး သူတို႔ကို အာ့အဘိုးအိုႀကီးကိုမျမင္ၾကဘူးလားဆိုတဲ့အၾကည့္မ်ိဳးနဲ႔ အားမနာတမ္းၾကည့္ပလိုက္မိတယ္။
တခ်ိဳ႕ဆိုအဲ့အဘိုးအိုေျခေထာက္ေတြေတာင္တက္နင္းၾကတယ္။ေဘးနားကအန္တီႀကီးကိုေမးၾကည့္ေတာ့ အဲ့တာ သူေတာင္းစားႀကီးေလ ဘယ္သူကသူ႔ကိုခုံေပးမွာလဲ႐ြံဖို႔လဲေကာင္းတာကိုးတဲ့ ကြၽန္မ မစဥ္စားေတာ့ပဲခ်က္ျခင္းထၿပီး ပါလာတဲ့ပိုက္ဆံ၂ေထာင္လုံးေပးၿပီး “ဘဘ လာ သမီးခုံလာထိုင္ဆိုၿပီးတြဲေခၚေပးလိုက္တယ္.. ။
စိတ္ထဲမွာလဲ ငါ့အေဖအေမသာဆိုရင္ဆိုတဲ့အေတြးေတြ နဲ႔မ်က္ရည္ေတာင္ဝဲတယ္။ ကားခ၂၀၀မရွိလို႔ပါဆိုၿပီးေျပာ စီးလာတယ္။ကားေပၚမွာအသိေတြလဲပါေကာင္းပါႏိုင္တယ္… ဒါမယ့္မရွက္ပါဘူး..အခုစာေရးေနတဲ့အခ်ိန္ ကြၽန္မဖ်ားေနတယ္ေလ အစာလြန္ၿပီးဗိုက္ေတြေအာင့္လို႔…ဘာျဖစ္ျဖစ္ေက်နပ္မိတယ္…။
Previous Article အတုယူဖို့ကောင်းတဲ့ Single mother ယဉ်ခိုင် ( ဖြစ်ရပ် )
Next Article ငါးပိ မုန်းတဲ့ မင်းသမီးလေး သံသာမိုးသိမ့် တပ်ပိုင်မြေဖြစ် သွားပြီ